6 Faa'iidooyinka Caafimaad ee Layaabka Leh ee Xiisaha Leh Shaaha CBD • Dawooyinka Inc.eu
6 La yaab iyo faa iidooyin caafimaad oo xiiso leh oo ka mid ah shaaha CBD
Dadku waxay isticmaaleen xashiishad iyo shaah dhirta boqolaal sano si ay ugu horumariyaan caafimaadka, bogsashada iyo nasashada. Isku darka maaddooyinka firfircoon ee ku jira xashiishadda (sida Cannabinoid) CBD) oo leh dhir daaweyn iyo dhir udgoon ayaa soo saaraya daawo u gooni ah oo yareyn karta astaamo kala duwan, kicin kara tamar isla markaana wanaajin kara niyadda. Tani waa inay noqotaa udub dhexaadka: isku darka muuqaalka buuxa, oo si caqli leh loo helo shaaha CBD oo diiradda saaraya guud ahaan caafimaadka.
1 1. Iska yaree hurdo la’aanta
2 2. Iska yaree walwalka
3 3. Daaweynta madax xanuunka
4 4. Ka yaree xanuunka daba-dheeraada
5 5. Iska yaree caabuqa
6 6. Iska yaree lallabada
7 CBD & caafimaadkaaga
Marka waa maxay faa'iidooyinka caafimaad ee aad filan karto markaad isku daydo shaaha CBD?
1. Iska yaree hurdo la’aanta
Ma jiraan wax ka xun xun tuurashada iyo soo jeedinta oo dhan habeenkii, sugaya ugu dambeyntii hurdo. Jooji silica oo bilaw cabashada! Shaaha CBD wuxuu ka caawin karaa dadka la il daran hurdo la’aanta isagoo yareynaya welwelka iyo yareynta xanuunnada jirka si aad u isdejiso oo aad u hesho hurdo wanaagsan oo habeenkii ah. Eeg isku-darrada raaxada iyo shaaha CBD oo ay weheliso, tusaale ahaan, chamomile.
Cab koob shaah CBD ah ka hor intaadan seexan oo rajeyneyso inaad yareyso hurdo la’aantaada (ilaha)
2. Iska yaree walwalka
Caadada fudud ee shaah la cabo subaxa hore ama fiidkii intaan la seexan ka hor waa jimicsi dajiya dad badan. Markaad ku darto geedo tayo sare leh iyo CBD, wax sixir ah ayaa dhaca.
Chamomile, Tulsi (aka "Holy Basil"), Kava iyo Hibiscus, tusaale ahaan, dhammaantood waxay leeyihiin guryo xasilloon oo gaar ah. Laga soo bilaabo nasashada guud ilaa hoos u dhigida cadaadiska dhiigga, dhirtan waxay u dhaqmaan sidii adaptogens - xalal dabiici ah oo ka caawiya jirka inuu la qabsado culeyska fekerka isla markaana caadi ka dhigo howlaha jirka. CBD waxay ku shaqeysaa tandem xulashooyinka dhirtayada, waxay u dhaqmeysaa sidii khadka difaaca ee kahortaga bararka, hoos u dhigista cadaadiska dhiigga iyo kobcinta niyadda.
Miyaad la xanuunsaneysaa walwal ama calaamadaha madax xanuunka? Sii iskuday koob shaah CBD ah (ilaha)
3. Daaweynta madax xanuunka
Miyaad eegaysaa shaashad aad u dheer? Madaxa wax ku dhufanaya hurdo yari iyo kafeyn badan? Dadka ay si joogto ah ugu dhacayaan madax xanuun ama madax xanuunka dhanjafku, CBD waxay soo bandhigaysaa gargaar soo dhaweyn ah. Cabitaanka shaaha CBD waxay kaa caawin kartaa xannibaadda neurotransmission-ka ee qaboojiyeyaasha xanuunka maskaxda waxayna joojisaa madax xanuunka liita ee dhismaya.
Shaaha, geedaha sida peppermint, chamomile iyo Valerian & Skullcap dhammaantood waxay leeyihiin astaamo u gaar ah oo ka caawiya madax xanuun, ay ka mid yihiin anti-bararka, xanuun joojinta iyo guryaha antispasmodic.
4. Ka yaree xanuunka daba-dheeraada
Malaayiin dad ah ayaa la nool xanuun joogto ah maalin kasta. Dad aad u tiro badan ayaa u soo jeedsanaya CBD iyagoo beddelaya dawooyinka dawooyinka badan ee dagaal, ee waxyeelada leh. CBD ayaa la muujiyay inay xakameyneyso nuugista jirka ee anandamide jirka, walax laxiriirta maaraynta xanuunka. Iyadoo la adeegsanayo CBD, geedaha anti-bararka waxay kordhiyaan saameyntan waxayna siiyaan gargaarka xaaladaha sida xanuunka dareemeyaasha, fibromyalgia, arthritis iyo waxyaabo kaloo badan.
Isku day inaad yareyso xanuunkaaga joogtada ah, caabuqa iyo lallabbo aad ku jirto shaaha CBD (ilaha)
5. Iska yaree caabuqa
Cadaadiska ayaa ah jawaabta dabiiciga ee jirka ee kicinta waxyeellada, laakiin cudurada qaarkood waxay sababaan jirka inuu ka jawaabo caabuq xad-dhaaf ah. Cudurka loo yaqaan 'IBD', arthritis, Chronen Multiple Sclerosis cudurku waa dhamaan noocyada cudurada 'autoimmune cudur' ee la xiriira bararka. Sababtoo ah CBD waa anti-bararka dabiiciga ah, dad badan oo qaba cudurro bararka waxay ku tiirsan yihiin CBD daaweynta dabiiciga iyo daaweynta dhibaatooyinkooda.
6. Iska yaree lallabada
Shaaha dhirta leh ee laga soosaaray xawaashka, sinjibiiliga, liinta iyo liisanka ayaa qarniyo badan loo isticmaali jiray daaweynta dabiiciga ah ee xanuunka caloosha. Dad badan ayaa sidoo kale ku tiirsan CBD si ay ula tacaalaan lallabbo iyo calool xanuun. Isku darka CBD iyo caleemo jilcisa caloosha sida basbaasku waxay u fidin kartaa gargaar dadka kujira kemotherabi, ama mararka qaarkood ku xanuunsada caloosha.
Dhirta kale waxay si toos ah ula shaqeyn karaan nidaamkayaga dareemeyaasha si ay si wanaagsan u habeeyaan dheefshiidka, sida caleenka linden iyo geedka hawthorn.
CBD & caafimaadkaaga
Xitaa haddii aadan qabin wax arrimo caafimaad ah, shaaha CBD waa hab cajiib ah oo wax ku ool ah oo lagu wanaajiyo niyaddaada isla markaana loo yareeyo walbahaarka. In kasta oo ay jiraan habab badan oo loo qaato CBD, qaadashada CBD ee shaaha foomka ayaa ka tagaya cannabidiol gaabis ahaan nidaamkaaga hana xanaaqin sambabbadaada haddii aad dareensan tahay dhibaatooyinka neefsashada. Intaa waxaa dheer, oo ay kujirto CBD shaaha ku siineysa gunnada dheeriga ah ee cabitaanka mugga shaaha dhirta lagu nasto. Shaaha waxaa ka buuxa antioxidant iyo fiitamiinno waxayna jirkaaga nadiifiyaan, iyadoo lagu siinayo nafaqooyinka qiimaha leh ee jirku doonayo.
Ilaha waxaa ka mid ah Brothers Apothecary (EN), EnjoyKickback (EN), Happytea (EN)
CBDcaafimaad lehcaafimaadkashaahcuntoAdduunka oo dhan
Dhismahan cusub ee ku jira alaabada CBD wuxuu kaa caawin karaa hurdada, welwelka iyo diirada
Qiyaastii 40 milyan oo qaan-gaar ah oo Mareykan ah ayaa la soo daristay walaac. CBD waxay si weyn uga caawin kartaa yareynta ...
Tababbarka Mass Mass: Darawalku wuxuu bilaabaa adeeg gaarsiinta xashiishadda
Hadda dad badan ayaa ku go'doonsan guryahooda, helitaanka xashiishada dawada waa dambi ...
Mike Tyson wuxuu aasaasay garoon loogu talagalay xashiishadda cannabis iyo dalxiis raaxo leh
Mike Tyson wuxuu lacag fiican ka helay feeryahan, xiddig filim sameeye iyo afhayeen guud. Isaga oo leh warshadaha xashiishadda ...
Maryan ayaa qoray:
31 December 2020 ee 14: 08
Bună ziua. Anigu waxaan shil ku ahay xididdada xididdada maskaxda ee ISCHEMIC IC THE 6 ANI. Ce ceai comn recomanda ți .. ??? . Sau ceva mai bun.?